यो कसको पहलमा भएको हो ? - Dhangadhi Khabar
बुधबार ०९, असार २०७८ २१:२८
यो कसको पहलमा भएको हो ?
मध्ये रातको साढे ३ बजेको थियो । एकजना बिरामीका आफन्तको फोन आयो । झट्ट बिउझिएँ ... कुराकानी भयो, सक्ने सल्लाह दिएँ ।
निदाउन खोजें ! बाहिर छुट्टै खालको आवाज सुनियो । एकछिन तर्सिएझैं भए । आफुलाई सम्हालें । सुनेझैं जस्तो लागिरहेको थियो त्यो आवाज । कसको हो ? कता सुनेको ह ? ठ्याक्कै ठम्याउन सकेन । एकदमै चिनेझैं लागिरहेको थियो बाहिरबाट आईरहेको आवाज ।
यो कस्तो आवाज ! एकोहोरो गतिमा सुस्त सुस्त आईरहेको थियो । बेलाबेलामा डराउन अनि तर्साउन खोजिरहेझैं लागिरहेको थियो । म त्यो आवाज अनि परिस्थितिबाट आफुलाई पर राख्न खोजिरहें । जति कोसिस गर्दा पनि नसुनेझैं गर्न सकिरहेको थिएन ।
अब के गरौं ! न त बाहिर गएर केही गर्न सकिरहेको थिएँ । जसोतसो ध्यान आफैतिर केन्द्रित गरें अनि निदाउन खोजें । तर, त्यो सम्भव भएन र निन्द्रा लाग्नै मानेन । बाहिरको अर्कै किसिमको आवाजले मन आत्तिएझैं भईरह्यो ।
मन आत्तियो ! अनि आँखिर किन यस्तो भैरहेको छ जस्तो लाग्यो । साँच्चिकै भएको हो कि ? भएझैं लागेको मात्र हो ? भन्ने पनि भयो । निकैबेर मनभरी खुल्दुली भयो । बेलाबेलामा डर पनि लाग्यो । धेरै बेरपछी मनमा एउटा प्रश्नमा आएर अडियो ...।
थुप्रै कुराहरू मनमा ब्युझिए ! आज यो सब के भैरहेको छ ? यो कसरी सम्भव भैरहेको छ ? मलाई यस्तो किन लागिरहेको छ ? के मलाई लागेको कुरा साँच्चै हो त ? मैले बाहिर सुनेको आवाज के पक्कै गुन्जिएको हो त ? बाहिरको स्थिति अनि परिस्थिति आफैमा सत्य हो त ?
धडधड धडधड धरधर धरधर तडतड तडतड तरतर तरतर धेरैदिन देखि कोसिस गरिरहेको बादल आज कसरी बर्सिन सकेछ ? वर्षातको झरिले आफ्नो सुन्दरता प्रकट गरेकै हो त ? भएभरका दु:ख, कष्ट, पीडा, रोग ब्याध पखाल्न आएकै हो त ? आँखिर यो कसको पहलमा सम्भव भएको हो ? #यो_कसको_पहलमा_भएको_हो ?
जोसुकैको पहलमा बर्सिएको भएपनी ! ४ ठाउँमा १६ पटक ६४ जनाले फोटो खिचेका, अक्सिजनका रित्ता सिलिन्डर जस्तो नहोस् । आफ्ना हनुमानहरु तिर मात्रै सोझिने, अनुदान अनि राज्य ढुकुटीका गतिविधि जस्तो नहोस् ।
आफ्नै गोजिबाट दिएजस्तो ! निर्लज्ज नेताहरूको फुई अनि नामकै लागि, काठमाडौ बाट दुर्गम जिल्ला खाली खाली पुगेजस्तो नहोस् । सिलिन्डर पनि कति अभागी सोच्दो हो, फेरि ट्रकमा लोड भएर भरिनका लागी सुगम गएजस्तो नहोस् । भ्याक्सिन आएजस्तो नहोस् ।
स्वास्थ्य सामाग्री आएजस्तो नहोस् । जोसुकैको पहलमा आएको भएपनी, भएभरका दु:ख, कष्ट, पीडा, रोग ब्याध पखालेर जाओस् । अनि फेरि सोध्नेछौं हामी, #यो_कसको_पहलमा_भएको_हो ?
बिहिबार ०६, जेठ २०७८ ०४:३७ मा प्रकाशित
माधब नेपाल पक्ष (39%)
केपि ओलि पक्ष (61%)
आज सुदूरपश्चिममा १ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, १०८जना निको
कञ्चनपुर प्रहरीद्वारा लागुऔषध कारोबारीको जालो भत्काउने अभियान
अछाममा परम्परागत पानीघट्ट लोप हुँदै
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागी आवश्यक तयारी गरेका छौँः नगरप्रमुख साउद
दार्चुलामा होमपाईपमा अड्किएर दुई बालकको मृत्यु
जिल्ला खेलकुद विकास समिति कैलालीका अध्यक्षले लिए शपथ
बाढी,पहिरो तथा जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्नका लागि उद्दारका सामाग्री तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन
देउवा निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्दै
भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र असार १७ देखि नियमित रुपमा आन्तरिक उडान
बुधबार सेती अस्पतालमा कोरोना परीक्षण शून्य
दार्चुलामा जोरबिजोर गरेर सवारी साधन चल्ने
धनगढीमा टिप्परले ठक्कर दिँदा कञ्चनपुरका चिकित्सकको मृत्यु
स्वास्थ्यर्मी मृत्यु प्रकरण ; अनुसन्धानका लागि धनगढीबाट दुईवटा प्रहरी टोली परिचालन
धनगढीको निसर्ग अस्पतालमा ७ किलोको मासुको डल्लो निकालियो
कैलालीमा १० वर्षीया छोरीको बलात्कार पछि हत्या गरेको अभियोगमा बुवा पक्राउ
सेती नदीले पनि नाघ्यो खतराको तह
सुदूरको कोरोना कमाण्डका ‘हिरो’ डा. निराजन !
- खगेन्द्र अवस्थी (डेस्क)